काठमाडौं । नेपाली चलचित्र, कला संगीत र मोडलिङको क्षेत्रमा यो के भइरहेको छ ? कलाकारहरु सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्न किन चुकिरहेका छन् ? के अहिले कलाकारितामा विकृति फैलँदै गएको हो ? यसबारे विभिन्न मानिसहरुका आआफ्ना धारणाहरु होलान्, तर पछिल्ला केही गतिविधिहरुलाई नियाल्ने हो भने नेपालको कला क्षेत्र उन्नयनमा भन्दा क्षयीकरणतर्फ अग्रसर भएको छ भन्न लजाउनु पर्दैन ।
केही सकारात्मक सोंच बोकेका चलचित्रकर्मीहरु भन्न थालेका छन्, ‘नेपाली चलचित्र उद्योग नै धरासायी बन्दै गएको छ ।’ यसका धेरै पक्ष र पाटो छन् । तर, संस्कृति निर्माणमा खराब अवधारणा दिन रूचाउने केही कलाकारहरुको भूमिका भने यहाँ नकारात्मक देखिन्छ ।
दिन–प्रतिदिन थपिँदै गएका नयाँ अनुहार सँगै उनिहरुको उदाङ्गोपनले कलाकारितालाई थप विकलाङ्ग बनाउन मद्दत पुर्याइरहेको छ । नाङ्गो बन्न तैयार समूह भने यसलाई व्यक्तिको अधिकारसँग जोडेर तर्क गरिरहेका छन् । कलालाई आफ्नो प्यासन भन्दा पनि यसको गलत प्रयोगद्वारा चर्चामा छाउने प्रचलन झाँगिएको छ । यसले समग्र कला उद्योगलाई छियाछिया बनाउनेमा कुनै दुविधा छैन ।
के यो नाङ्गोपनले नेपाली कलाको उन्नयन होला ? (फोटो फिचर)
-१८ बर्षमाथिका लागि मात्र
फोटो साभार नेपाली हट मोडल फेसबुक पेज